Banyere Anyị - Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ Co., Ltd
Bovines & ézì
Reproductive Ókè mmiri ọgwụ
Fish Reproductive Ókè mmiri ọgwụ
Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ Factory guzobere 1988. Anyị na-e-agba mbọ ka anụ ozuzu ụlọ ọrụ ruo afọ 30, na anyị ikpokọta akụrụngwa, nnyocha na mmepe, rụpụta, ule, ahịa, na ahịa nkwado ọnụ na-a ukwuu enterprise. Anyị ụlọ ọrụ e ọdịda dị ka "Zhejiang High-tech ụlọ ọrụ" na Cixi Top 20 ụlọ ọrụ ".
Anyị ụlọ ọrụ nwere a mbara ndepụta omumu na ngwaahịa, na anyị na ngwaahịa ndị na-eri-irè. Anyị na-nwere anyị isi ngwaahịa 'API aha. Anyị nwere ndị kasị ibu akpali mmasị anụmanụ ụlọ na ógbè na ịchọpụta anyị ngwaahịa mmetụta ụmụ oke na oke. Ya mere, irè ma kwụsie ike nke ngwaahịa na-ekwe nkwa. Anyị omumu hormone-ewe ihe karịrị 50% ahịa òkè nke dum mba akpa anụ ụlọ na ndị ọrụ ugbo ahịa. Anyị bụ ndị isi soplaya Mengniu, Yili, Modern ọrụ ugbo, Beijing isi obodo ugbo, COFCO, Zhongding Mmiri ara ehi ọrụ ugbo, Wens, Chuying Agro-azụ atụrụ, Chia Tai otu, Bright Mmiri ara ehi na ndị ọzọ na nnukwu ụlọ ọrụ.
Anyị ụlọ ọrụ nwere J.Randall technology na R & D ike. Professional dọkịta na-eduga 30 akwụkwọ ahụ elites ka anyị R & D otu, ịga nke ọma mepụtara ihe karịrị 100 na ngwaahịa, na ụfọdụ nke ngwaahịa na-etinye n'ime mmepụta akara. Anyị Chorionic Gonadotropin (HCG) 's akụrụngwa potency (10000iu / mg) bụ a otutu elu karịa European na American Pharmacopoeia ụkpụrụ (4500iu / mg), na anyị na-enwe mba aha. Anyị na-kwara na mmepe nke ọhụrụ ngwaahịa: D sodium chloride na Butylamine atọ mmanya prostaglandin F2 Alfa bụ ọhụrụ anyị edebanyere ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ ọjọọ, na-na ahịa. (Anyị bụ naanị factory na ka aha D chloride nnọọ.) Anyị ụlọ ọrụ aha Menotropins maka Ọgwụ (aha ọzọ: Chaopai su).
Anyị ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji azụ, ezì, edetu ehi, atụrụ, anu ulo, wdg N'ihi azụ, anyị nwere onyinye Salmon GnRHa maka ọgwụ maka apịtị azụ. N'ihi ezì, anyị ugbu a na ịdenyere aha tongfasu (bụbu aha PC600), na nwere otu pesticide mmetụta dị ka Intervets 'PG600. Ọhụrụ anyị ịdenye ngwaahịa Altrenogest onu mmiri mmiri gafere ozi nke agriculture nyochaa, na ga-rụchaa ịdenye anya. Anwale anyị Altrenogest na nnukwu akpa anụ ụlọ, mgbe akwalite swines 'ogbe management, ọ oji mgbanwe; n'otu oge, iji PMSG na GnRH ọnụ maka swines 'ofu oge insemination, rụọ swines' ozuzu ike. N'ihi na-edetu ehi, iji GnRH na D chloride ọnụ maka edetu si ofu oge insemination, nwere mmetụta dị mma nke corpus luteum, ma rụọ ọrụ edetu ehi ime ọnụego.
Kemgbe afọ 30, anyị na-anọgide na-achụso elu uzu iji na-enye mma ngwaahịa na ọrụ ahịa anyị. Anyị ozi bụ nzube anyị na-a na-eduga si ọtụtụ mba ụlọ ọrụ na-nwere ihe kasị mma àgwà anyị ubi. Anyị ọhụụ bụ anyị ga-ụwa kasị elu nkà na ụzụ na ọkachamara elites ike kasị mma na kasị mma ọrụ, na-na-enweta aha na ahịa òkè ezi ịtụkwasị obi na iguzosi ike n'ezi nakwa dị ka anụ mma.
Anyị Altrenogest Omenala Gmp Certificate
Ahịa bịara na nke anyị Facility